Belly Fat – Healthy Life Journal
(၁) အစာမစားခင် ရေတစ်ဖန်ခွက်သောက်ပေးပါ။ (၂) တစ်နေ့မှာ အစာနည်းနည်းနဲ့ ငါးကြိမ်စားပေးပါ။ (၃) အစာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း စားပေးပါ။ (၄) တစ်နေ့ မိနစ် ၂၀ နဲ့ တစ်ပတ်ငါးရက်ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ (၅) ကိုယ်စားနေတဲ့ အစားအသောက်ပမာဏကို သိနားလည်ပါ။...
ဗိုက်ပူတာကြောင့် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာ ကိုယ်အလေးချိန်များတာကိုပဲ အလေးထားနေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ပိန်တယ်၊ ဝတယ်ဆိုတာထက် ခါးတုတ်ပြီး ဗိုက်ပူတာက ကျန်းမာရေးကို ပိုထိခိုက်စေနိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့် ခါးအတိုင်းအတာကို တိုင်းကြည့်ပါ၊ ခါးအတိုင်းအတာက အာဆီယံနိုင်ငံက အမျိုးသားတွေမှာ ၃၆ လက်မ၊...
၀မ်းဗိုက်အဆီ လျော့ကျစေမည့် နည်း ၁၀
ဗိုက်မှာ အဆီပိုတွေများပြီး ဗိုက်ပူတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေသာမက အမျိုးသားတွေအနေနဲ့လည်း အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်တဲ့အခါ စမတ်မကျတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဗိုက်ပူတာက ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် ဗိုက်ပူတဲ့ပြဿနာ လျော့ကျစေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) သကြားလျှော့စားပါ။ (၂) ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အဆီတွေကိုစားပါ။...
ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးများခြင်းနှင့် ကလေးအဝလွန်ရောဂါ
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— အခုခေတ်က ကလေးတွေ ဂိမ်းအရမ်းဆော့ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဆော့နေကြတာ များပါတယ်။ ဒီလိုဆော့တာဟာ တကယ်တော့ တစ်ရက်ကို တစ်နာရီလောက်သာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှုမရှိ ဖြစ်နေတာက အဝလွန်ရောဂါဖြစ်စေဖို့...
အိပ်ချိန်နည်းတဲ့သူတွေ ပိုဝပါသလား . . .
———၊ အထွေထွေအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး ဖြေကြားသည်။ ၊——— Q. အိပ်ချိန်မမှန်ဘဲ အိပ်ချိန်နည်းတဲ့သူတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ပိုဝလွယ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ စားတာက အသားဖြစ်သလား၊ အားဖြစ်သလား ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စာရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုဝစေပါသလဲဆရာ။ Hnin (FB) A....